SIDA LOO KEYDIYO KAABAJKA KOHLRABI EE XILLIGA JIILAALKA IYO MARKA AY U BAAHAN TAHAY IN LAGA SAARO? KU ILAALINTA KOHLRABI CUSUB MAQSIN IYO GURIGA - WIXII MARTIDA
Kohlrabi Cabbage - warshad bienaal ahMid ka mid ah noocyada ka mid ah kaabajka caadiga ah ee caadiga ah ayaa iska leh caleenta reer Kabbage ee qoyska Cabbage.
Nooca noocan ah ee kaabajka ah waa badeecad aad u qiimo badan oo loo isticmaalo dadka. Waxay ka kooban tahay borotiinka qudaarta iyo carbohydrateska, dufanka qaab kasta oo gebi ahaanba maqan.
In khudradda fiitamiin badanTusaale ahaan, B1, B2, PP iyo qadar aad u badan oo fitamiin C ah, taas oo lagama maarmaan u ah jirka bini-aadanka si kor loogu qaado difaaca. Kohlrabi waxaa ku jira glucose, fructose, xeryaha sulfur, birta, fosfooraska, magnesium, potassium iyo kalsiyum, kuwaas oo looga baahan yahay nafaqada caafimaadka leh iyo horumarka wanaagsan ee jirka carruurta.
Kohlrabi waxaa loogu yeeraa "Qalab kaabashka" ee u egtahay muuqaalkeeda muuqaalkeedii. Geedkeeda waa cabirka tufaax weyn. Waxay dhacdaa caddaan, cagaar cagaaran, buluug, iyo guduud.
Nooc cagaaran dhadhan sida qajaar, qaar ka mid ah - dabocase, iyo dhar guduudan - badanaa fiiqan.
Kohlrabi waad cuni kartaa cusub ama la karkariyey. Cuntooyin kasta oo ka mid ah ayaa si siman leh dhadhan fiican leh. Laakiin inta badan fiitamiinada iyo macdanaha ee dhirta khudradda u dhintaan sababtoo ah daaweynta kuleylka. Sidaa daraadeed, hooyadey kasta waxay isku dayeysaa in ay kaabajiso kilyaha ilaa inta macquul ah.
Xulashada iyo nadiifinta kala duwan
Sida loo keydiyo kaabajka kohlrabi ee xilliga jiilaalka iyo marka ay u baahan tahay in laga saaro? Wixii ugu kaydinta muddada fog ee this khudradda cagaaran isticmaalka stebleplody noocyo dambe.
Waxaa ugu habboon tan arintan madow (guduud, buluug) noocyo.
Ku tiirsanaan wanaagsan Waxay kala duwan yihiin: Giant, Violetta, Cossac F1, Delicacy Blue. Noocyo caddaan ah ayaa si aan fiicnayn loogu kaydin karo kaydka dheer.
Kaabashka Kohlrabi waa la goostay marka dabeyshadu ay gaareen cabbirka 7-8 cm dhexroor. Kor u kaca, waxay noqdaan kuwo adag, iyo dhadhanka waa mid aad u liidata dhirta si fiican u bislaaday.
Tani waa in la sameeyaa, sida kiisaska leh kaabajka caadiga ah ee caadiga ah, maalinta cadceeda ka hor bilawga ah ee dhaxan fiicanmarka heerkulka dibedda ka baxsan yahay 3-5 digrii.
Inkasta oo kohlrabi uu qabow u adkaysto, oo si sahal ah ayuu u saameyn karaa heerkulka heerkulka ilaa -4-5, si loo ilaaliyo hufnaanta dalagga waxa uu ka wanaagsan yahay in laga saaro. maalmaha kulul.
Haddii la qorsheeyay kaydinta dheer kaabajka, ka dibna indhaha laga xiro si aad uga soo baxdo ciidda oo ay weheliso xididka. Haddii kaydinta dheer ee aan la filaynin, oo ayan qaadin bil ka badan si ay u keydiso, ka dibna xididka leh saxaraha waa la jari karaa.
Caleemaha stebleplod waa in laga saaraa, oo yar yar waxay u muuqataa ilaa 1.5-2 sentimitir dheer. Caleemaha la jarjaray ayaa la cuni karaa si la mid ah sida asalka. 2-3 maalmood gudahood waxaa lagu kaydin karaa qaboojiyaha baakadaha.
Waxaad ka ogaan kartaa sida iyo wakhtiga ay ku jiraan sprouts Brussels iyo kaabajka midabka laga goosto boggayaga internetka.
Sidee loo ilaaliyaa kohlrabi jiilaalka cusub? Inta ugu badan hab lagu kalsoonaan karo kaydinta muddada dheer ee kaabajka kohlrabi - kaydinta Maqsin. Ka dib markii caleemaha ka soo stelplods la gooyaa, kaabashka leh xididada waxaa la dhigay dhowr sanduuqyo, dambiilo, gaar ah loo sameeyey qaybaha ama on ganaax.
Jidka ma laha ma maydhin karaan, waxaad u baahan tahay oo kaliya inaad nadiifiso dhulka si ay u sii ahaadaan kuwo qalalan. Laga soo bilaabo kochanchiki kor ku rusheeyey ciid qoyan ama daboolay polyetylen, laakiin aan aad u dhagan, si aanay u bilaabi duurjoogta dhirta.
Khiyaar kale oo lagu keydiyo kaabajka Maqsin waa in la qaybiyo ciid qoyan dhulka hoostiisa oo ku xaji madaxyada kaabajka ah ee hoos u dhiga, sida haddii "Dhirta".
Tani sidoo kale waa hab fiican oo wax ku ool ah, laakiin waxay u baahan yihiin in la "beeray" meel fog oo ka mid ah midba midka kale si ay iyaga isma taabteen midba midka kale.
Waxaad xiri kartaa stebleplody ilaa xididada siligga. Si kastaba ha noqotee, waa inayna xiriir la wadaagin. Heerkulka Hawada ee dhulka hoostiisa waa inay noqotaa qiyaas ahaan 0 darajo. Qaraabo qoyaan hawada - 95-100%.
Haddii Maqsin qalalan, waxaa lagula talinayaa in la dhigo weel biyo ah si loo ilaaliyo qoyaanka lagama maarmaanka ah. Heerkulka xilliga jiilaalka waa la xakameyn karaa kuleylka Qeybta hoose.
Maqsin, halka ilaalinta heerkulka iyo dayactirka qoyaan gaar ah, noocyo hore ee kaabajka ah waxaa lagu keydin karaa 2 bilood. Noocyo kala-soocid ah ayaa u dhigma cusub illaa 5 bilood. Sidan ayaad naftaada u siin kartaa kaabajka cusub xilliga qaboobaha.
Hab wanaagsan oo lagu keydiyo kaabajka kohlrabi ee guriga waa qashin. Xaaladdan oo kale, stebleplody u baahan tahay si aad u dhaqdo. Markaas waa lagama maarmaan in la gooyaa kala badh, qaybo dhowr ah ama shabaggeedii on hayso weyn. Faafidda baakooyinka, waxaad u baahan tahay inaad geliso qaboojiyaha.
Ku talin kahor intaan la jarin blanch xabbadood oo ah stelplod for 3 daqiiqo oo qabow biyo baraf ah si ay u ilaaliyaan fitamiin badan intii suurtagal ah.
Kohlrabi waxaa loo kaydin karaa barafoobida illaa iyo inta ay le'eg tahay 9 bilood. Waxaad karsan kartaa nooc ka mid ah kaabajka ah sida cusub, saxan kasta oo kasta.
Si aad u ogaatid sida loo xakameeyo kaabajka cad, midabka, iyo sidoo kale sprouts iyo Brokoli, waxaad ka baran kartaa maqaaladayada.
Sida loo keydiyo kaabash kohlrabi jiilaalka? Xaaladda kohlrabi u baahan tahay in la dhigo waqti aad u gaaban, 2-3 toddobaadWaxaad u isticmaali kartaa qaboojiyaha tan. Ku duub madaxaaga warqad ama ka sii wanaagsan maro qoyan, bacaha maro qoyan ayaa la isticmaali karaa.
Ka dibna ku rid bac caag ah. Xeelad ha xirin xirmadasidaas darteed saameynta aqalka dhirta lagu koriyo lama abuurin gudaha iyo stebleplodes ma sii xumaanayso.
Sidaa daraadeed, kaabajka kohlrabi waa la ilaalin karaa ilaa goynta xigta siyaabo kala duwan:
Guud ahaan, kaabajka kohlrabi si fiican u haystay. Xataa heerkulka qolka, dhammaan nafaqooyinka ayaa lagu kaydiyaa ilaa 2-3 maalmood.
Hal dariiqo ah oo lagu ilaaliyo kaabajka kohlrabi ee xilliga jiilaalka waa in salad laga dhigo. Sida loo sameeyo tan, waxaad ka baran doontaa fiidiyowga:
Caajisku wac kaluun "Boqoradda khudaarta", maxaa yeelay waxaa suurtogal ah in lagu diyaariyo noocyo kala duwan oo suxuun iyo nafaqo leh. Laakiin ha ilaawin in caydhinimada dheeraadka ah lagu kaydiyo, adag waxay noqdaan Kaabashka noocan oo kale ah ka yar dhadhan fiican iyo qiimo leh ee ka kooban.
Raadinta dhammaan talooyinka ku saabsan kaydinta miraayadaha miraha, waxaad awoodi doontaa inaad naftaada iyo dadka aad jeceshahay ku farxi kartid inta lagu jiro jiilaalka oo idil raashinka fitamiin oo cajiib ah.